TRF ao amin'ny Gazety 2018 Ny Valisoa Fanomezana, Ny Fitiavana, ny Firaisana ary ny Aterineto
Home TRF ao amin'ny Press 2018
Ny gazety dia nahita ny The Reward Foundation ary manaparitaka ny teny momba ny asantsika, anisan'izany ny kilasin'ny fanentanana amin'ny pôrnôgrafia; ny antso ho amin'ny fanabeazana mahomby, atidoha amin'ny ati-doha amin'ny sekoly rehetra; Mila fampiofanana ho an'ny mpitsabo NHS momba ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafika sy ny fandraisanay anjara fikarohana amin'ny fihenan'ny firaisana ara-nofo ateraky ny sary vetaveta. Ity pejy ity dia manasongadina ny fahombiazantsika tamin'ny gazety sy an-tserasera nandritra ny taona 2018
Raha mahita tantara iray mitondra ny TRF izahay dia tsy navotsotra, azafady alefaso aminay ny fanamarihana momba izany amin'ny fampiasana ny endrika fifandraisana amin'ny faran'ity pejy ity.
10 Desambra 2018. Tany am-piandohan'ny Desambra 2018 ny ekipa TRF dia nandeha tany Budapest any Hongria izay nanoloran'i Mary Sharpe ny "fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana sy ny fifandraisana" tamin'ny fihaonambe "Fanondranana olona an-tsokosoko any Hongria: fanamby ankehitriny sy ho avy ary fomba fanao tsara indrindra - Ny vokany an'ny tontolon'ny Internet ”. 'AZ INTERNETES ANTANANARIVO HATÁRAI AZ HATÁSAI AZ EGYÉNRE ÉS A TÁRSADALOMRA ', Budapest, 3 Desambra 2018.
Ny famelabelarana feno dia azo jerena Eto.
26 Aogositra 2018. Mary Sharpe dia nanome fanehoan-kevitra momba ny tranga mampiahiahy ao amin'ny fitsarana schottes. Lahatsoratra nosoratan'i Vic Rodrick. Pejy 10 sy 11 amin'ny dika printy.
FITSIPIKA iray avy amin'ny SEXUAL no miatrika fiainana any am-ponja noho ny fanolanana karazana tovovavy tsy ampy taona sy zatovovavy nifandray tamin'ny media sosialy.
Ao amin'ny tranga ratsy indrindra amin'ny aterineto any Scotland, nampiasa Facebook i Gavin Scoular, Snapchat sy Skype mba hifankahalalany amin'ireo niharan-doza.
Ny taona 23 dia hanomboka amin'ny resaka tsy manan-tsiny - indraindray herinandro - handresena ny fitokisan'ny zazavavy alohan'ny hanosehana azy ireo handefa sary nalainy.
Avy eo dia nanakiana azy ireo tamin'ny fihaonana azy manokana izy ireo tamin'ny fandrahonana hamoaka ny sary 'manerana izao tontolo izao hijery', alohan'ny fanararaotana sy fanolanana azy ireo.
Voampanga ho meloka tamin'ny Alakamisy izy noho ny fanendrikendrehana tovovavy dimy - anisan'izany ireo telo niharam-boina tamin'ny mbola kely.
Mpitsara iray tao amin'ny Fitsarana Ambony tao Livingston koa dia nanameloka azy noho ny fanitsakitsaka folo hafa, anisan'izany ny fametavetana ara-nofo, ny fanaovana sary tsy mahazatra tsy misy fanekena ary ny fandrahonana ny mizara ireo sary.
Nandritra ny fitsarana andro sivy andro, mpitsara mpisolo vava an'i Stephen Borthwick, nanenjika azy, dia nanamarika an'i Scoular ho 'mpametaveta ankizy' ary nilaza ireo vavolombelona fa nanao tantara mitovy amin'ny fihetsiny. Hoy izy nanampy: 'Nanazava azy ireo izy. Gavin Scoular dia nizotra tamin'ny resaka nifanaovan'ny lahy sy vavy tamin'ny fahafantarany tsara fa tamin'ny taona 16 izy ireo, teo ambany fe-potoana nanaiky.
'Niangavy azy rehetra izy ireo mba hampiseho azy ireo sarin'ny vatana mangatsiaka. Indraindray dia nangataka azy ireo izy mba handefa sary azy.
'Nampiasa an'ireny sary ireny izy ireo ho fomba iray hifehezana ny fitondran-tenany, mba hahatonga azy ireo hanao izay tiany. Nifindra tany amin'ireo tovovavy izy tsirairay. Raha ny fijeriny manokana dia nifanena tamin'izy ireo izy noho ny antony iray - nanaiky hanao firaisana ara-nofo tsy ara-dalàna. '
Nilaza ny iray tamin'ireo niharam-boina fa 13 fony i Scoular, avy any Niddrie, Edinburgh, dia nifandray taminy. Namono azy tamin'ny hafatra sy fangatahana tsy mitsaha-mitombo kokoa izy talohan'ny nanirahany azy handefa sary tsy misy sary.
Hoy izy: 'Tsy niteny haingana aho, fa nanontany foana izy. Nolazaiko azy fa tsy te-handefa sary aho fony aho 14. Tsy fantatro ny antony.
'Taorian'ny nandefasako azy voalohany ilay izy dia nandrahona ny hamoaka izany amin'ny media sosialy.
'Nolazainy fa raha tsy mandefa sary iray hafa izy dia handefa ilay sary izay efa nananany manontolo tao amin'ny Facebook izy.
'Nanjary tsapako fa tsy maintsy nanao izany aho. Tsy tiako ny zanako rehetra manerana ny Facebook.
'Taorian'ny nandefasako ilay sary faharoa dia niala tsiny izy noho ny filazany fa nametraka ny sary tao amin'ny Facebook izy, noho izany dia navelany izy.'
Nanaiky izy fa handeha hody any Scoular, izay nanolana azy.
Hoy izy hoe: 'Te hitomany aho fa izaho no nitazona izany rehetra izany. Natahotra aho. Te-hivoaka fotsiny aho raha vao azoko. Nolazaiko azy fa nalahelo izany. Nasaiko nijanona izy. Nandeha fotsiny izy. '
Mpitsena iray hafa no 14 rehefa nifandray taminy tamin'ny webcam i Scoular.
Tamin'ny voalohany, ny resadresaka dia momba ny zavatra andavanandro, toy ny sekoly, saingy nandrahona handainga tamin'ireo namany izy fa nanao firaisana izy ireo raha tsy nandefa sary tsy mendrika izy.
Nolazainy fa i Scoular dia nanakorontana azy mba handevona ny tratrany nandritra ny video chat-n'i Skype, ary nandray ny ScreenBeing
'Te hitomany aho. Natahotra aho. Nasaiko najanona '
voatifitra. Nampiasa ny sary ho mainty izy, nanery azy hihaona aminy akaikin'ny Ocean Terminal ao Leith ary nanafika azy.
Ny sazin'i Scular ihany no 12 rehefa nifandray tamin'ny media sosialy izy ary nandresy lahatra azy mba hihaona aminy. Nandeha an-tongotra tao amin'ny Golf Course Portobello izy ireo, izay nanoroka sy nanangona azy - na dia efa fantany aza ny taonany.
Niresaka tamin'ireo tra-boina roa koa izy fa niasa tao amin'ny toeram-pisakafoanan'ny filan-kevitra, nampianatra ny ankizy hilomano.
Nolazain'i Scoular fa "antoko diso" izy ary nilaza ireo niharam-boina tamin'ny 'lainga mahatsiravina' momba azy. Nilaza izy fa nanaiky hanao firaisana daholo izy ireo.
Niaiky izy fa tamin'ny fotoan'ny heloka bevava, teo anelanelan'ny 2010 sy 2014, dia 'nanintona ny tovovavy tamin'ny tovovavy' izy nefa nahatsapa 'mahatsiravina' izany.
Hoy izy: 'Tsy faly amin'ny zavatra nataoko aho. Fantatro kosa anefa izay nataoko, ary ratsy ny nataoko. '
Ny alina lasa teo, Mary Sharpe, lehiben'ny vondrona fampielezan-kevitra ny Valin'ny Fananana, dia nampitandrina ny fahazoana sy ny tsy fisian'ny anarana - ny 'zava-miafina' - ny fampahalalam-baovao sosialy dia nahatonga ny fitsaboana an-tserasera ho lasa mihamitombo.
Hoy izy hoe: 'Mora ny mandefitra olona amin'ny teny fitiavana sy fanehoam-pitiavana an-tserasera. Raha misy bitsika mangataka sary, mora ny mandefa sary. '
Nanampy i Ms Sharpe fa ireo olo-malaza tahaka an'i Kim Kardashian dia mahatonga ny tanora hihevitra fa ara-dalàna ny fanaovana firaisana ara-nofo.
Hoy izy hoe: 'Ny kolontsainay dia maneho ny vatanareo ary izany no zava-misy ara-norma manana an'io fomba fiainan'ny olo-malaza io. Kolotsaina malaza kokoa izany. izay mahazatra ny manao firaisana ara-nofo dia mahazatra eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny ary mahatonga azy ho mora amin'ny lehilahy ny manangona zatovovavy. Izany no kolontsaina izay mampiomana azy ireo ho marary kokoa. '
Scoular dia niatrika ny fiampangana 132 tany am-piandohana tamin'ireo tovovavy 100 sy ny zatovovavy. Ny mpampanoa lalàna dia nifantoka tamin'ny heloka bevava faran'izay ratsy sy tamin'ny fitsarana izay niatrika ny fiampangan'ny 34. Taorian'ireo vavolombelona
Araka ny porofo nosoratany dia nendrikendrehan'i Scoular ho meloka amin'ny fiampangana izany, anisan'izany ny fikarakarana ny lahy sy vavy amin'ny fametavetana tovovavy 12-taona, manana fifandraisana amin'ny sehatra an-tserasera amin'ny zazavavy 14year amin'ny alàlan'ny Skype ary mangataka amin'ny fandefasana azy sary tsy mendrika.
Nanaona fanitsakitsahana enjehina enina mahakasika ny fikarakarana sy ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy ampy taona miaraka amin'ny tovovavy 14 taona hafa koa izy. Tao amin'ny Fitsarana Ambony tamin'ny alakamisy izy dia hita fa meloka noho ny fiampangana fiampangàna dimy ho an'ireo niharan-doza dimy taorian'ny 'fitsaboana' azy ireo tao amin'ny media sosialy.
Ny mpitsara ihany koa dia nahatsikaritra azy fa meloka folo hafa noho ny fanolanana ara-nofo, anisan'izany ny fitondran-tena tsy miangatra sy ny fivoriana tsy ara-dalàna ary ny tsy ampy taona amin'ny firaisana ara-nofo tsy ara-dalàna.
Taorian'ireo didim-pitsarana voamarina dia hita fa nanefa sazy an-tranomaizina efatra sy enhalf taona i Scoular, izay napetraka tao amin'ny 2014, noho ny fandikan-dalàna toy izany izay misy ankizivavy roa tsy ampy taona.
Nampidirina an-tsoratra nandritra ny folo taona ny anarany.
Ny Mpitsara Lord Summers dia namoaka sazy hatramin'ny volana septambra 19 tao amin'ny Fitsarana Ambony tao Edinburgh.
Nampitandrina an'i Scoular izy hoe: 'Tsy tokony hihevitra ianao fa mitady fotoana lava be ianao.'
Scular dia halefa indray amin'ny mpandika lalàna ary dia nogadraina izy.
25 Jolay 2018. Mark Blunden, ny News and Technology Reporter dia nanome fandrakofana tsara ho an'ny The Reward Foundation sy ny olana momba ny tsy fihenan'ny erectile amin'ny pejy 11 an'ny London Evening Standard. Noraisin'ny Nigerian Bulletin.
16 Jolay 2018. Kay Smith dia nanoratra kely fotsiny ny lahatsoratra nosoratany tamin'ny Alahady The Times.
15 Jolay 2018. Mary Sharpe dia nadinadinina tamin'ny alàlan'ny Scottish Mail tamin'ny alahady mikasika ny votoatin'ny lesona ho an'ireo sekoly ambaratonga voalohany novolavolan'ny The Reward Foundation. Page 21. Misy dikan-dizitan'ny lahatsoratra Eto.
15 Jolay 2018. Mary Sharpe nanoratra ity hevitra feno pejy ity. Page 38.
15 Jolay 2018. Ny lahatsoratra voalohany dia nivoaka tao amin'ny The Scotsman ao amin'ny pejy 7 ary azo jerena -tserasera (fampitandremana: mety ho nipoitra ny sary) Nalaina avy amina Tax Free Insider koa ilay lahatsoratra.
4 Jolay 2018. Mary Sharpe sy Darryl Mead dia nadinadinina tamin'ny SecEd, vavahadim-pifandraisana an-tserasera ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa ao Angletera. Ny lahatsoratra voalohany dia azo jerena Eto.
28 Febroary 2018, nitafa amina resadresaka momba ny serivisy vaovao espaniola Tu Cosmopolis i Mary Sharpe.
25 Febroary 2018. Lahatsoratry ny teny Espaniôla momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia, mifantoka amin'ny tantaran'ny pôrnôgrafia ny tantaran'i Gabe Deem, miaraka amin'ny teny avy any Darryl Mead sy Mary Sharpe, sy Gary Wilson ary Dr Valerie Voon. Ny lahatsoratra feno dia misy Eto.
4 Febroary 2018
Azo jerena ihany koa ny tantara -tserasera ao amin'ny Sunday Times.
Ity tantara ity ihany koa dia nihazakazaka tao amin'ny Financial Financial News tamin'ny 24 Janoary 2018